Juventus oo xiriir la sameysay wakiilada Maurizio Sarri si uu u noqdo badalka Massimiliano Allegri – Gool FM
(Italy) 21 Maajo 2019. Juventus ayaa raadineysa macalinka cusub ee bedeli doona tababare Massimiliano Allegri, kaasoo ka tagaya Kooxda dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Wargeyska “Corriere dello Sport” ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in kooxda Juventus ay xiriir la sameysay wakiilada Maurizio Sarri dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay, si ay ugu war galiyaan in Bianconeri ay dooneyso saxiixiisa.
Juventus ayaa u aragta Maurizio Sarri inuu yahay dooqa ugu fiican ee badalka u noqon kara Massimiliano Allegri, inkastoo uu kooxda Chelsea kula jiro qandaraas gaarsiisan ilaa iyo 2021-ka.
Waxaa jira warar xan ah ee ku aadan mustaqbalka Maurizio Sarri ee garoonka Stamford Bridge, maadaama lala xiriirinayo in macalinka reer Talyaani uu isaga tagi doono kooxda reer England, kaddib finalka koobka UEFA Europa League.
Yeelkadeeda, Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa xaqiijisay dhawaanahan in macallin Massimiliano Allegri uu naadiga ka tagi doono dhammaadka xilli ciyaareedkan kaddib markii uu kula guuleystay 11 koob muddo shan sanadood ah oo uu la joogay.